Vaovao - Ahoana ny fisafidianana paompy slurry?
Rehefa mikarakara slurries ianao dia matetika ny mpampiasa no tsy maintsy misafidy ny fananganana milina vita amin'ny kofehy na vy ho an'ny paompin-drongony. Ny tabilao 1 amin'ny faran'ity lahatsoratra ity dia manome fampitahàna famintinana ny endrika roa.
Slurry dia ranon-javatra misy solo-javatra mihantona. Ny abrasiveness an'ny slurry dia miankina amin'ny fifantohana mafy, ny hamafiny, ny endriny ary ny angovo kinetika matevina mifindra amin'ny paompy. Ireo slurries dia mety manimba sy / na manjavozavo. Ny solida dia mety misy ny sazy bitika na fitaovana matevina lehibe kokoa izay matetika tsy miova endrika sy mizara.
Ny famaritana ny fotoana hampiasana paompy sentrifugal style slurry dia mety ho fanapahan-kevitra sarotra. Matetika ny vidin'ny paompy slurry dia imbetsaka amin'ny paompin-drano mahazatra ary io dia mety hahatonga ny fanapaha-kevitra hampiasa paompy slurry tena sarotra. Ny olana iray amin'ny fisafidianana karazana paompy dia ny famaritana na tsia ny tsiranoka halefa raha ny marina. Azontsika atao ny mamaritra ny slurry ho toy ny tsiranoka rehetra izay misy solida betsaka noho ny an'ny rano azo sotroina. Ankehitriny, tsy midika izany fa paompy slurry dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fampiharana rehetra miaraka amina habe amin'ny solida, fa farafaharatsiny paompy slurry no tokony hodinihina.
Ny pumping slurry amin'ny endriny tsotra indrindra dia azo zaraina ho sokajy telo: ny slurry maivana sy antonony ary mavesatra. Amin'ny ankapobeny, slurries maivana dia slurries izay tsy natao hitondra solido. Ny fisian'ireo solida dia miseho tampoka noho ny famolavolana. Etsy ankilany, slurries mavesatra dia slurries izay natao hitaterana fitaovana avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa. Matetika dia matetika ny tsiranoka mitondra ao anaty slurry mavesatra dia ratsy fotsiny amin'ny fanampiana amin'ny fitaterana ireo fitaovana tadiavina. Ny slurry antonony dia iray izay mianjera eo anelanelany. Amin'ny ankapobeny, ny isan-jato Percent ao anaty slurry antonony dia 5% ka hatramin'ny 20% ny lanjany.
Rehefa tapitra ny fanapahan-kevitra momba ny fifandraisanao amin'ny slurry mavesatra, salantsalany na maivana, dia tonga ny fotoana hampifanarahana paompy amin'ny fampiharana. Ity ambany ity dia lisitra ankapobeny momba ny toetra mampiavaka ny slurry maivana sy antonony ary mavesatra.
Toetra mampiavaka ny fahazavana:
● Tsy fanahy iniana ny fisian'ny mivaingana
● Haben'ny habe <200 microns
● Slurry tsy mipetraka
● Ny gravity manokana slurry <1.05
● Latsaky ny 5% ny valaka mavesatra
Toetra mampiavaka ny slurry antonony:
● Mikraoba habe 200 microns ka 1/4 inch (6.4mm)
● Fonenana na slurry tsy mipetraka
● Ny gravity manokana slurry <1.15
● 5% ka hatramin'ny 20% solo-kilao amin'ny lanjany
Toetra mampiavaka ny slurry mavesatra:
● Ny tanjon'i Slurry dia ny fitaterana fitaovana
● Solida> 1/4 santimetatra (6.4mm)
● Ny hery misintona voafaritra> 1,15
● Mavesatra mihoatra ny 20% ny lanjany
Ny lisitra teo aloha dia ny filana fitarihana haingana manampy amin'ny fanasokajiana ireo paompy isan-karazany. Ny fiheverana hafa izay mila dinihina rehefa mifantina maodely paompy dia:
● Hamafin'ny hatezerana
● Volo zara
● Haben'ny potika
● Haingam-pandeha sy tari-dàlana
● maranitra sombiny
Ireo mpamorona paompy slurry dia nandinika ireo lafin-javatra rehetra voalaza etsy ambony ireo ary nanamboatra paompy hanomezana ny fiainana farany andrasan'ny mpampiasa farany. Mampalahelo fa misy ny marimaritra iraisana sasany natao mba hanomezana fiainana andramena azo ekena. Ity latabatra fohy manaraka ity dia mampiseho ny endrika famolavolana, ny tombony ary ny marimaritra iraisana amin'ny paompy slurry.